Iyo yekushandisa Mifananidzo muIOS 15 ichatizivisa kubva kupi application iyo mifananidzo inouya | IPhone nhau
Nekufamba kwemazuva, vanoona zvitsva izvo Apple zvisina kuzivisa paWWDC 2021, mabasa ayo kunyangwe chiri chechokwadi asiri kunakidza ruzhinji rwevanhu, kana vachigona kuve vevamwe vashandisi. Imwe yeaya mabasa ekuda kuziva anowanikwa mu Mifananidzo application.
Iyo yekushandisa Mifananidzo neIOS 15, inotibvumidza shandisa data yeEXIF yezvifananidzo yatakachengeta mumudziyo wedu pamwe neruzivo kubva kwaitorwa kubatwa (kana paine data reGPS) kuwedzera kune imwe data. Uye zvakare, zvinotibvumidzawo isu kuziva kuti vasvika sei veduwe.
Chokwadi pane kanopfuura kamwe chiitiko, paunenge uchiongorora yako yemapikicha albam, iwe unoshamisika mamwe mafoto kana mavhidhiyo akasvika sei ipapo. Ne iOS 15, unogona nekukurumidza uye nyore kuziva mavambo emifananidzo iyi.
Sezvo isu tichigona kuona mumufananidzo uri pamusoro, pakati pemetadata iyo Apple inotipa isu yemifananidzo yese yatinochengeta, mavambo avo anoratidzwa zvakare. Muchiitiko chemufananidzo uri pamusoro, tinogona kuona kuti eKwayakabva nemufananidzo uyu iko kunyorera kweSafari.
Paunenge uchitsvaga paSafari, iyo application icharatidza mifananidzo yose inobva kunzvimbo imwechete. Ndinovimba basa iri rinozivawo mifananidzo yese nemavhidhiyo akachengetwa pane yedu kifaa uye anobva kuWhatsApp.
Basa iro pasina mubvunzo richazokosheswa nevose vashandisi vasina kusimbisa iyo bhuku rekuchengetedza mifananidzo nemavhidhiyo mukati mesarudzo yekushandisa mameseji, sezvo ichizokutendera kuti ubvise iwo ese pamwechete uye kusunungura yakawanda nzvimbo.
Parizvino iOS 15 inongowanikwa kune vanogadzira. Izvo hazvizove kusvika muna Chikunguru, sekusimbiswa neApple, apo yekutanga beta inotangwa kune vese avo vashandisi vari chikamu che Apple yeruzhinji beta chirongwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 15 » Iyo yekushandisa Mifananidzo muIOS 15 ichatizivisa kubva kupi application iyo mifananidzo inouya
Apple inoburitsa yechitatu betas yeIOS 14.7, watchOS 7.6 uye macOS 11.5